‘बजारको ट्रेन्ड चेन्ज गर्न खोजेका छौँ’– निकिता आचार्य |
प्रकाशित मिति :2017-10-06 16:24:46
काठमाडौं । नेपालमा अनलाइन विजनेशको कुरा उठ्दा निकिता आचार्यलाई नचिन्ने बिरलै होलान् । ६ वर्षदेखि इ–कमर्स (अनलाईन विजनेश) गर्दै आएकी उनी यस क्षेत्रकी एक सफल व्यवसायी हुन् । काठमाडौं पेप्सीकोलाकी निकिताले नयाँ बानेश्वरमा अर्वान गर्ल र पुरानो बानेश्वरमा युजी केकर्स (बेकरी अर्डर लिने ठाउँ) सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । सानै उमेरदेखि इ–कमर्समा लागेकी निकितासँग महिला खबरको लागि सन्दिप वि.कले गर्नुभएको कुराकानी ।
अनलाइन विजनेश गर्ने सोच कसरी आयो ?
हामीले अनलाइन विजनेश सन् २०१२ बाट सुरु गरेका हौं । जुन समय म बीबीएस तेस्रो वर्ष अध्ययनरत थिए । त्यतिबेला अनलाइन सप गर्ने ट्रेन्ड नै थिएन । मेरो साथी झापाका किरण तिल्मिसिना र मैले सुरु गर्यौ । हामी दुबैजना पहिले आइटी कम्पनीमा काम गथ्र्यौ । त्यसमा खासै राम्रो हुन नसकेपछि हामीले १०-१० हजार रुपैयाँ उठाएर आफ्नै बिजनेश अर्वान गर्ल र युजी केकर्स सुरु गर्यौ ।
मैले पहिले इन्टरनेटमा अन्तर्राष्ट्रिय वेभ साईटहरू पनि हेरिरहेकी हुन्थे । तिनीहरूको आइडिया चाख लाग्दो थियो । अनलाईनमा गयो । कुनै सामान मन पर्यो भने अर्डर गर्ने ।
त्यतिबेलाको समयमा यस्तो पनि हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । ठ्याक्क एउटा डिमान्ड क्लिक गर्नेबित्तिकै घरमै सामान आउने । नेपालमा भने त्यो समय अनलाईन सप खासै थिएन । अहिले नेपालमा धेरै छन् ।
सुरुमा केबाट सुरु गर्नुभयो ?
सुरुमा हामीले यहिका स्थानीय उत्पादनहरूलाई नै अनलाइनमा राख्यौं । अर्डर आएपछि आफै डेलिभर गथ्र्यौ । उपभोक्तासँग फिडव्याक पनि आफँ लिन्थ्यौ । तर, यहाँका मान्छेहरूले त्यो आइडिया रुचाउनुभएन । किनकी उहाँहरूको आफ्नै पसलबाट सामान सेल भइराखेको थियो । हामीले हामीसँग भएका सामानलाई अनलाइनमा राख्यौ । ग्राहकको अर्डर बमोजिम घरसम्म पुर्याउन थाल्यौ ।
हाम्रो पहिलो टार्गेट कलेजका विद्यार्थी थिए । पहिले हामीले पुरानै अफिस सुविधानगरबाट काम गर्यौ । पछि हामी त्यहिबाट सिप्ट भएर शान्ति नगरमा अफिस नै खोलेर काम गर्न थाल्यौ ।
दुई जनाबाट सुरु भएको अनलाईन सपिङ बिजनेशको मार्केट बिस्तार हुँदै गयो । पछि १० वटा जति डिमान्ड आउन थालेपछि हामीले एक जना डेलिभरि गर्ने मान्छे राख्यौ । तीन जनाको टिमबाट सुरु भएको विजनेशमा अहिले ३८ जना छौ ।
तपाईँहरू सामान पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ कि ? के के उत्पादन गर्नुहुन्छ ?
६ वर्षको दौरानमा यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै उत्पादन गरेका छौं । एउटा अवार्न गर्ल छ । अर्को युजी केक हो । अर्वान गर्लको एउटा ब्रान्च युजी केक्स हो । पहिले हामीले अवार्न गर्लमा केटीहरूलाई हुने उत्पादनहरू बेच्थ्यौ । अर्वान गर्लमै हामीले म्यानिफ्याक्चरहरू पनि गर्छाै । जस्तो टिर्सटहरू, फोटो पेन्टेन्डहरू, सिल्भरको नेम पेन्टेन्डहरू सबै हामीले नै बनाउँछौ । हामी कस्टोमाइजलाई नै फोकस गर्छौ । जस्तो कस्टोमाईज टि, कस्टोमाईज कपहरू हामी बनाउँछौ ।
अर्को हामीले बेकरी पनि बनाउँछौ । हाम्रो सेलिङ भनेको युजी केक हो । उपभोक्ताले जस्तो केक भन्छन् त्यस्तै तयार गछौँ । हामीले बेसरी आइटम सबै उत्पादन गर्छौ ।
तपाईँहरूका उत्पादनहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् ?
बजारको अवस्थालाई हेर्दा हामीले ट्रेन्ड नै चेन्ज गर्न खोजेका छौं । हामी सुरुको अवस्थादेखि अहिलेसम्म नेपाली मार्केटको ट्रेन्ड चेन्ज गर्न खोजिराखेका छौं । त्यहि भएर हाम्रो बजार भनेको अनलाईनलाई नै बनाउन खोजेका छौं । मान्छेले अनलाईन किनोस् । पहिले केक हेरेरै किन्नुपर्छ । बेकरी गएर किन्नुपर्छ भन्ने जुन ट्रेन्ड थियो त्यो चेन्ज भइसकेको छ । त्यसले केक पनि मान्छेले आफ्नै डिजाइनमा बनाउन सक्नुहुन्छ ।
बजारमा सबैभन्दा धेरै हामीले सेल अनलाइनबाटै गर्छौ । अनलाइनबाट नै हाम्रो अर्डरहरु आउँछ । हामीले केकहरू काठमाडौं उपत्यकाभित्र जहाँ पनि डेलिभर गर्छौ । त्यहि भएर बेकरी आइटक काठमाडौं उपत्यकाभित्र भयो भने बेकरी बाहेक अर्वान गर्लको सामानहरू हामीले नेपाल भरि नै डेलिभर गर्छौ ।
आफ्नो कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट छौ । तर, पनि जे छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर हुँदैन् । जब अर्वान गर्ल थियो इकमर्स राम्रै चलिराखेको थियो । त्यसमा सन्तुष्ट भएर लागेको भए युजि केक आउदैनथ्यो होला । युजि केकमै सन्तुष्ट भएर बसेको भए युजि चक्लेट आउँदैनथ्यो होला । अहिले जे छ जसरी चलिराखेको छ, राम्रै चलिराखेको छ । अझै धेरै अगाडि जान्नुछ ।
आम्दानी कति हुन्छ ?
हामीले पहिले पकेट मनिबाट सुरु गर्यौ । अहिलेसम्म आउँदा विजेनेशबाट ठूलो रकम त तयार गरेका छैनौं । तर, जे थियो त्यसैबाट अगाडि बढाएका छौं । जे जति कमाई हुन्छ यसैमा लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रो सोचाई आफूले पनि राम्रो गर्ने र अरुलाई पनि रोजगारी दिलाउनु हो । अहिले हाम्रो विजेनेश पनि फस्टाएको छ । ग्राहकले विश्वास गर्नुभएको छ । साथ दिनुभएको छ ।
पहिले २÷३ वटा मात्रै अर्डर हुने अवस्था थियो भने अहिले दिनकै ६०-७० वटा अर्डर हुने गरेको छ । रेगुलर रुपमा त्यति अर्डर हुनु आफैमा राम्रो हो । महिनामा हाम्रो १५ लाख जति कमाई हुन्छ । हाम्रो सेल अनलाईनबाटै हुन्छ । फेसबुक, भाइबर, वेभसाइड, फोनकलबाट अर्डर आउँछ । अर्डरलाई घरघरसम्म पुर्याउछौ ।
जोखिम पनि छ होला नि ? अहिलेसम्म के कस्ता समस्याहरू झेल्नुभएको छ ?
अनलाईन विजनेशमा जोखिम धेरै छ । विजनेश भनेकै रिक्स (जोखिम) हो । धेरै समस्या छ । सुरु गर्दादेखि नै हाम्रो समस्या बजारको थियो । बजार पनि हामी आफैले बताउनुपर्यो । अनलाईनबाट पनि सामान किन्न मिल्छ भन्ने सोच भएको भए सुरुदेखि सजिलो हुने थियो । मान्छेलाई अनलाईन सपिङका बारेमा सोच पनि थिएन् । त्यसैले बजार बनाउनै हामलाई दुई–तीन वर्ष लाग्यो ।
अहिले जुन बजार बनेको छ । त्यसमा जो पायो त्यसैले चलाएका इकर्मसहरू आइरहदा समस्या भएको छ । एक दुई महिनाको लागि खोल्ने । अरुले त खोल्यो । म पनि खोल्छु भन्ने देखासिकी छ । जसले गर्दा नराम्रो सर्भिस भएको अवस्था छ भने ग्राहकले विश्वासै गरिहाल्ने अवस्था छैन । अनि बनेको बजार पनि बिग्रिरहेको अवस्था छ । पहिलो पटक अनलाइनमार्फत सामान किन्ने ग्राहक यदि नराम्रो अनलाईन सर्भीसमा पुग्न गयो भने त्यसको नराम्रो प्रभाव पर्छ ।
अर्को कुरा अनलाइन सुरु गर्दा सानै उमेरमा गरियो । मान्छेले विश्वास कम गर्थे । तर, १-२ वर्षपछि आफूले राम्रो सर्भिस दिन थालेपछि भने सहयोग मिल्दै गयो ।
अहिले नयाँ पुस्ता इकमर्समा आकर्षण हुन थालेका छन् ? कतिको सहज छ ?
अहिले इकमर्समा आउने धेरै मान्छेहरू आफूलाई काम गर्न मन लागेर होइन् । अरुले गरिरहेको देखेर आउने गर्छन् । इकमर्स खोल्नु ठूलो होइन् दिगो हुनु ठूलो कुरा हो । इकमर्समा राम्रो छ । राम्रो खालको इकमर्श आएमा मार्केट चाहिँ बन्छ । इकमर्शमा आउनुस् । तर, बल्ल बल्ल स्थापित भएको मार्केटलाई ध्वस्त नपार्दिनुस् । अहिले मान्छेले अनलाईनमा पनि मार्केट हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न थालेको अवस्था छ । यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ आउनुस् । तर आफूलाई स्थापित भने गर्नुपर्छ ।
यो क्षेत्रमा आउन यति ठूलो साहस गर्नुभएको छ ? के छन् तपाईँका भावी योजना ?
मैले परिवारमा यो काम गर्छु भन्यो भने काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ । हामी सबैले आँटेको काम गर्न सक्छौं । तर, साहस गर्नुपर्छ । नेपालमै पनि केही गर्न सकिन्छ । मेरो आगामी योजना भनेको व्यापार नै हो । तर, यो व्यापारलाई काठमाडौंमा मात्र सिमित नगरी उपत्यका बाहिर पनि लैजाने योजना छ । हरेक वर्ष यो व्यवसायलाई कसरी ठुलो बनाउने ? भन्ने सोच छ । म यहि व्यवसायबाट अगाडि बढ्छु ।